छेडागाडमा मेड्पा अन्तर्गत उद्यमशिलताका तालिमहरु सम्पन्न – Hamropahuch
हाम्रो पहुँच संवादाता १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार मा प्रकाशित
जाजरकोट, १३ फागुन । छेडागाड नगरपालिकामा गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तरर्गतका सबै उद्यमशिलता विकास तालिम सम्पन्न भएका छन् ।
६ वटा उद्यमशिलता बिकास तालिम संचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४ वटा तालिम यस अघि नै वडा न. १० र ११ मा सम्पन्न भैसकेका छन् भने बिहिवार एक कार्यक्रमका बिच वडा न. ३ र ४ मा दुईवटा तालिम सम्पन्न सङ्गै यस वर्ष सन्चालन हुने सबै तालिम सम्पन्न भएका हुन् ।
सहभागीहरुको उद्यमशिलता सोचको बिकास गरी उनीहरुलाई स्थानिय श्रोत,बजार माग र उनीहरुको रुचि अनुसारका सीप बिकास तालिम छनोट गर्न नगरपालिकाका विभिन्न वडाका गरि १ सय ३५ जनालाई उद्यमशिलता तालिम सन्चालन गरिएको नगरपालिकाका मेडपा कार्यक्रम संयोजक रमेश अधिकारीले बताए । साथै, सीप विकास तालिम दिनु पूर्र्व छनोट भएका सम्भावित उद्यमिहरुलाई समेटी उक्त तालिम प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मागमा आधारित रणनीतिका आधारमा विभिन्न ९ वटा बिषयमा सीप बिकास तालिमहरु छनोट भएको र लगत्तै उक्त विषयका तालिमहरु संचालन गरिने पनि उनले जानकारी दिए । मेड मोडेलमा उधमी सृजना गर्दा उधम सुरु गर्नका लागि चाहिने सबै सेवाहरु एकीकृत रुपले प्रदान गरिन्छन् । यस मोडेलमा यो तालिम पछि मात्र सीप विकास तालिम प्रदान गरिने भएकोले आवश्यक ज्ञान, सिप र अनुभवका आधारमा ब्यक्तिले उधम सन्चालन गरी दिगो उद्यमी बन्ने उनको भनाई छ ।
कर्णालीका रिक्त चार मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी मन्त्री केसी र भण्डारीलाई
नलगाडमा पाँच घर जलेर जलेर नष्ट,परिवारको विच्चली
कोरोना जोखिम : २५ जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाईने